Xog-ururinta Caddaaladda Deegaanka | City of San Diego Official Website
Wax ka baro mashruucan oo noo sheeg waxa adiga iyo qoyskaaga muhiimka idiin ah!
Magaalada San Diego waxay la shaqeyn doontaa bulshadeeda si ay u cusboonaysiiso siyaasadaha ku jira Qorshaha Guud ee Magaalada iyada oo la sameeynayo Qodobka ama Cutubka Cadaaladda Deegaanka. Xog-ururintani waxay bilaabaysaa hanaanka cusbooneysiinta iyadoo bixinaysa macluumaad asalka ah isla markaana ku weydiinaysa fikirkaaga ku aadan meelaha iyo arrimaha ay tahay in siyaasadaha Caddaaladda Deegaanka diiradda saarto.
Waa maxay Qorshaha Guud ee Magaalada, maxayse qabataa?
Qorshaha Guud waa dukumenti bixiya qiyam iyo tilmaamo lagu maareeyo dhulka magaalada dhexdeeda ah, oo ay ku jiraan dhismayaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha, laamiyada, jidadka, adeegyada aasaasiga, jardiinooyinka, deegaanka dabiiciga ah, iyo waxqabadyada dhulkaas. Qiyamka iyo tilmaamaha ku jira Qorshaha Guud waxaa lagala tashadaa dadweynaha, shaqaalaha magaalada, kooxaha la-talinta, guddiyada go'aan qaadashada iyo guddiyada, iyo Golaha Magaalada marka ay soo saarayaan talooyin isla markaana ay gaaraan go'aanno la xiriira mowduucyada ku jira Qorshaha Guud. Soo-jeedinta iyo go'aannada waa inay la jaan-qaadaan tilmaamaha ku jira Qorshaha Guud.
Qorshaha Guud si toos ah uma soo saari doono mashaariic laga fulinayo bulshadeena, laakiin taa bedelkeeda wuxuu qorsheeyn doonaa oo uu hagi doonaa howlaha magaalada ee mustaqbalka. Qorshayaasha bulshada, siyaasadaha Golaha Magaalada, barnaamijyada kaabayaasha iyo barnaamijyada hagaajinta xarunta, iyo miisaaniyadaha sannadlaha ah ee Magaalada ayaa si wada jir ah ula shaqeyn doona Qorshaha Guud si loo qorsheeyo hagaajinta dhamaan xaafadaha San Diego. Cusbooneysiinta siyaasadaha iyo tilmaamaha Qorshaha Guud si looga shaqeeyo Cadaaladda Deegaanka ayaa ah talaabo muhiim ah oo lagu gaarayo sinnaan iyo taageeridda dhammaan dadka reer San Diego si ay u gaaraan awoodooda buuxda.
Waa maxay Cadaaladda Deegaanka?
Waxaa jira qaabab badan oo looga fikiro Caddaaladda Deegaanka. Xog-ururintaan waxaa hagaya qeexida Cadaaladda Deegaanka sida "In si cadaalad ah loola dhaqmo dhammaan dadka jinsiyadaha, dhaqamada, iyo dakhliga kala duwan marka loo eego horumarka, dhaqangelinta, hirgalinta, iyo meel marinta sharciyada deegaanka, xeerarka, iyo siyaasadaha" (Qaybta Shuruucda Dowladda ee California 65040.12 (c)). Si kale haddii loo dhigo, Caddaaladda Deegaanka waxay xaqiijinaysaa in dhammaan dadka jinsiyadaha, dhaqammada, iyo dakhliyada kala duwan leh si siman oo sinnaan ah loo qiimeeyo, loo ilaaliyo, looguna adeego sharciyada, qawaaniinta, iyo siyaasadaha saameynta ku leh deegaanka nagu wareegsan, oo ay ku jiraan sharciyada ku aadan isticmaalka dhismayaasha iyo dhulka, gaadiidka, jardiinooyinka iyo meelaha dabiiciga ah, muuqaalka magaalooyinka, iyo adeegyada magaalada.
Mawduucyada gaarka ah qaarkood ee ku jira Caddaaladda Deegaanka ayaa ah:
Soo-gaadhista wasakhowga hawada ee ka yimaada baabuurta iyo wasakhowga ka yimaada ganacsiyada iyo waxqabadyada warshadaha
Helitaanka kheyraadka caafimaadka wanaagsan, oo ay ku jiraan cuntada caafimaadka leh iyo dukaamada raashinka, meelaha nabdoon oo lagu sameeyo jimcsiga jireed, daryeelka caafimaadka, iyo adeegyada caafimaadka.
Soo-gaadhista halista caafimaad ee ay ugu wacantahay saamaynta isbeddelka cimilada
Helitaanka kaabayaal nabdoon iyo tas-hiilaadyo taageera jimicsiga jireed, oo ay ku jiraan laamiyada, jidadka baaskiiladaha, jardiinooyinka, iyo xarumaha madadaalada
Helitaanka guryo, oo ay ku jiraan guryo ammaan ah oo caafimaad leh
Awood u lahaanshaha deggenayaasha inay isdhexgalaan midba midka kale iyo Magaalada si loo tixgeliyo oo loo sameeyo go’aano saamaynaya caafimaadka bulshada iyo arrimaha deegaanka
Aqoonsiga Meelaha aan loogu Adeegin ama aan Lagu Ilaalin caddaaladda
Mid ka mid ah natiijooyinka Qodobka Caddaaladda Deegaanka ayaa ah in la ogaado xaafadaha San Diego ee dakhligoodu hooseeyo oo si aan sinayn usoo gaadhay ama u saamaysay wasakheynta deegaanka iyo dhibaatooyin kale oo u horseedi kara saamayn caafimaad oo xun ama nabaad-guurka deegaan. Kadib marka la aqoonsado xaafadahaan, xaaladaha xaafadaha ayaa la falanqeyn doonaa si la iskugu dayo in la aqoonsado xaaladaha ka qaybqaadanaya khataraha caafimaadka iyo deegaanka iyo sidoo kale tallaabooyinka iyo ficilada siyaasadeed ee wax looga qabanayo xaaladahaas. Jawaabahaaga ku aadan xog-ururintan, oo ay la socdaan xogta sayniska iyo kaabayaasha, waxaa loo isticmaali doonaa in gacan looga geysto aqoonsiga xaafadahan iyo tallaabooyinka wax looga qabanayo baahiyaha xaafadda.